Waxtarka liin dhanaanta 16 faaido oo cajiiba - Caafimaad tips
Home / Cuntada / Waxtarka liin dhanaanta 16 faaido oo cajiiba
Waxtarka liin dhanaanta 16 faaido oo cajiiba
Admin November 09, 2018 Cuntada
Liin dhannaantu waa mid mucjiso badan waayo liin dhanaantu waa aashito balse markii ay jidhka gudaha u gasho waxay yaraysaa aashitada jidhka taasna waxaad ka garanaysaa waxtarka liin dhanaanta sidaas darteed liin dhanaantu waxay koobsatay mucjisooyin fara badan oo aynaan halkan ku soo koobi karin laakiin waxaynu soo bandhigaynaa faaiidooyinka caafimaad ee liin dhanaanta laga helo kuwa cilmi baadhis lagu ogaaday isla markaana laysku waafaqsan yahay waxtarkooda.
- Akhriso waxtarka lawska
- Akhriso waxtarka xabxabka
- Akhriso waxtarka misirka
Faaiidooyinka liin dhanaanta
maadaama liin dhanaanta faaiidooyinkeedu tiro badan yihiin hadana sidaan hore u sheegnay hadana dadka qaar waxay dhibaato ka sheegtaan liin dhanaanta iyo gaaska liiska hoose waxaynu ku taxaynaa faaiidooyinka caafimaad ee liin dhanaanta ee cilmi baadhis lagu sugay iyo jidhka bini aadamka sida ay ugu wanaagsan tahay liin dhanaantu hadii uu qofku cunisteeda joogteeyo, waxayna hagaajisaa.
Liin dhanaanta iyo galmada : run ahaantii dad badan oo dunida ku nool ayaa ah kuwoo siyaabo kala duwan u isticmaala liin dhaanaanta waxayna ku daaweeyaan xanuuno aad u badan laakiin waxaa jira suaalo liin dhanaanta la iska waydiiyo inta badan waxaana ka mida.
Liin dhanaanta iyo galmada ?
Haa dabcan qofku hadii uusan iska badin liin dhanaantu rabitaanka jinsiga way kordhisaa waayo waa awood dabiici ah oo alle siiyay iyada.
Liin dhanaanta iyo gaaska
Waxaa jirta suaal qofkasta iswaydiiyo taas oo ah liin dhanaantu gaaska miyay kicisaa ?
Jawaabtoo kooban waa haa hadi aad ka qaadan waydo xadi kugu filan.
Liin dhanaanta iyo wajiga
Sidoo kale waxaa jirta suaal ku saabsan marsashada liin dhanaanta ee wajiga taas oo ah liintani wajiga ma nuurisaa oo ma la marsan karaa wajiga ,jawaabta oo kooban waa haa waliba hadaad wajigaaga ku daliigto oo marsato waxay ku siinaysaa iftiin shacni ku siinaaya.
Hadaba intaa ka dib waxaan halkan kuugu soo gudbinaayaa faaiidooyinka caafimaad ee liin dhanaanta kuwa waxtarnimadooda la isku waafaqsan yahay.
Shaqada beerka way hagaajisaa
Kansarka way la dagaalantaa
infekshanka waa ka daawo
Liin dhanaantu timaha way saartaa
cabudhka way daawaysaa
Xididada way xoojisaa
Aragga way wanaajisaa
Fitamic C ayaa ka buuxa
Nafaqo ayaa laga helaa
Waa jeermis dile